Kenya:Maxkamada Sarre ee EU Ayaan Codsi U Gudbinay |
Kenya:Maxkamada Sarre ee EU Ayaan Codsi U Gudbinay
Inkastoo marar kala duwan aan soo bandhigay waxyeelada iyo dhibaatada Qaadku u leeyahay bulshada somaliya hadana waxaan isku dayi doonaa in aan halkan ku bayaaniyo Warbixino kala duwan oo aan ka soo aruuriyay wargeyyadda ka soo baxa dalka kenya,kuwaasi oo qaabab kala duwan kaga hadlay isku dayga kenya ee in qaadka loo furo wadamo badan oo yurub ah.
Wargyska The Star ayaa waxaa uu qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay dawlada kenya ayaa codsi u dirtay maxkamada Eu sifo loogu ogolaado in qaadka dib loogu furo dalka UK oo horey baarlamanka wadankaasu u diiday,nin u hadlay dawlada Kenya oo lagu magacaabo Kimathi Majuri ayaa warbaahinta u sheegay in rajo wanaagsan laga qabo in dib ay ugu guuleystaan sidii qaadka loogu ogolaan lahaa dalka kenya.
Kenya 20′Tan oo Jaad ah ayeey u dhoofin jirtay dalalka Yurub taaso oo badalkeeda ay ka soo gali jirtay Lacag dhan SH.1.4 Million waana dhaqaale aad u badan hadiii lacagtaasi joogsatay,iyadoona dawlada Uhuru kenya wado sidii Midowga yurub iskaga kaashan lahaayen sidii dib loogu soo celin lahaa aafadasi.
Dhaqdhaqaaqa kenya ayaa waxaa uu ujeedadiisa tahay sidii loo heli lahaa hab lagu dhoofiyo qaadka iyo in wadamada yurub laga dhaadhiciyo sidii ay Abid u joojin lahayn qaadka oo dhaqaale ahaan meel sare kaga jira lacagaha soo gala wadanka kenya,waxaana dawladaha yurub xiliyo hore dareemen dhibaatada kala duwan oo dadka wadamadasi ku nool ee ka soo haajiray wadamo afrika uu ku hayo.
Abuukar Cawaale oo ah nin u istaagay ka hortaga qaadka gaar ahaan dalka UK isla markaasina ku guuleystay ayaa waxaa uu u arkaa arinta qaadka in ay tahay mid lagu bahdilayo somalida meel kasta oo ay joogto isagoona dhiniciisa sheegay in uu isku dayi doono sidii u joojin lahaa meelo badan oo somaliya ka mid ah hadiila isku dayana la joojin karo.
SOmalida qaarkood ee wadamada Qaar ee caalamka ku nool ayaa soo dhaweeyay in loo wada istaago joojin tiisa waxana ay u arkeen aafo ka hadhay,waxaana barka kale ee haray u arkeen arin meel ka dhac ku ah joojintaasi waxyaabo badan oo ay kaga mashquuli jireen waxyaabo aan micno lahayn sida ay u arkaaan.
Booska Baanaani Waakee dawlada somaliya waxaa looga baahan yahay in ay sameyso sidii ay uga hortagi lahayd in qaadka uu ku soo siyaado somaliya maadama wadamada Yurub iska diiden waxaana taasi badalkeeda kenya isku dayi doontaa in qaadkaasi loo soo weeciyo dhinaca somaliya aysan jiri cid si dhab ah isku gutaageysa sidii loo joojin lahaaa.
Dawlada somaliya waxaa haboon in ay isku daydo sidii ay ugu yaraan ula socon lahayd dhaqdhaqaaqyada dhaqaale ee dalkeeda marka laga soo tago amniga oo muhiimada koowaad ah,maxaa yeelay somaliya lacagta kenya looga qaado maalin walba waxaa ay ka kafeyn lahayd in dhaqaalahsi waxyaabo kale oo loo baahan yahay dalka looga qabto.